အနဝေေးတဲ့ စုံတှဲတှရေဲ့ အားသာခကျြ (၈) ခု - Latest Myanmar News
အနဝေေးတဲ့ စုံတှဲတှရေဲ့ အားသာခကျြ (၈) ခု
June 8, 2021 by Latest Myanmar News
အဆငျပွတေဲ့ အခဈြရေး ဖွဈဖို့အတှကျ နတေို့ငျး အမွဲတမျး တှနေ့စေရာ မလိုပါဘူး။ အနဝေေးနပေမေယျ့ တဈယောကျကို တဈယောကျ နားလညျမှု ရှိနရေငျ အဆငျပွနေမှောပါ။ အနဝေေးတဲ့ စုံတှဲတှမှောလညျး အားသာခကျြတှေ ရှိပါတယျ ။
1. သေးသေးမှားမှား ဂရုစိုကျတာက အစ တနျဖိုး ရှိပါတယျ။
ဖုနျးဆကျတာ၊ message ပို့တာက အနဝေေးသူတို့ အတှကျ ပြျောစရာအခကျြလေးတှေ ပါပဲ။ ပို့ထားပွီးသား message လေးတှကေို ပွနျဖတျရတာ ကလညျး ကွညျနူးစရာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အဆကျအသှယျ မပွတျဖို့ကတော့ အရေးကွီး ပါတယျ။
2. ကိုယျပိုငျအခြိနျတှေ ပိုရပါတယျ။
အနဝေေးနေ တာကွောငျ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတှရေ့တဲ့ အခါ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပျတှေ ပိုလုပျဖို့ အခြိနျပိုရလာ ပါတယျ။ တှစေ့ရာလညျး မလိုတာကွောငျ့ အခြိနျကုနျလညျး သကျသာ ပါတယျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျပွီး ရနျဖွဈဖို့ အခှငျ့အရေးလညျး နညျးသှား တာကွောငျ့ တျောတျောနဲ့ လမျးမခှဲနိုငျတော့ ပါဘူး။
3. စိတျလှုပျရှားစရာ ကောငျးပါတယျ။
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အခြိနျတှေ အကွာကွီး ဝေးပွီးမှ ပွနျတှရေ့တာဟာ ရငျခုနျ စိတျလှုပျရှားစရာ ကောငျးပါတယျ။ အဲဒီပြျောရှငျမှုကို ဖျောပွဖို့ စကားလုံးနဲ့တောငျ မလုံလောကျ ပါဘူး။ အကွာကွီးခှဲနပွေီးမှ တှရေ့တဲ့ အခြိနျဟာ ဘဝမှာ အပြျောဆုံး အခြိနျထဲက တဈခြိနျ အပါအဝငျ ပါပဲ။
4. တဈယောကျကို တဈယောကျ ပိုပွီး အလေးအနကျ ထားလာပါတယျ။
အနဝေေးတဲ့ စုံတှဲတှရေဲ့ အားသာခကျြက (အပြျောတှဲတာ မဟုတျရငျ) တဈယောကျကို တဈယောကျ အလေးအနကျပိုပွီး ထားလာတာပါ။ တဈယောကျရဲ့ အလုပျကို တဈယောကျက နားလညျပေးပွီး စိတျရှညျပေးတဲ့အခါ အခဈြက ပိုလေးနကျ လာပါတယျ။ နားလညျမှု ရှိတဲ့အခါ လမျးခှဲခွငျး ဆိုတာ အဝေးမှာပါ။
5. ပိုပွီး ခဈြလာကွ ပါတယျ။
အခဈြစဈ ဆိုတာ အနဝေေးတဲ့ စုံတှဲတှကွေားမှာ ပိုတှရေ့ပါတယျ။ အနဝေေးနေ တာတောငျ မပွောငျးလဲသေးရငျ တကယျ ခဈြလို့ပါပဲ။ တခြို့ဆိုရငျ နီးနီးလေးနဲ့ ဝေးနတေတျ ကွပါတယျ။
6. ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အားကိုးတတျ လာပါတယျ။
အနဝေေးနေ တာကွောငျ့ အခကျအခဲ တှနေ့ခြေိနျမှာ နားထောငျပေးတာ၊ အကွံပေးတာ လောကျပဲ လုပျပေးနိုငျမှာပါ။ ကနျြတဲ့အပိုငျးတှေ ကိုတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုပဲ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရ မှာပါ။ မကောငျးတာတဈခုက အခွားကိစ်စကွောငျ့ မဟုတျဘဲ တဈယောကျကို တဈယောကျ စိတျဆိုးနရေငျ ပွနျအဆငျပွဖေို့ အခြိနျတျောတျော ယူရမှာပါ။
7. ကိုယျ့ရုပျရညျနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
လူခငျြးမတှရေ့ တာကွောငျ့ ဖုနျးပွောနခြေိနျ၊ message ပို့နခြေိနျမှာ ကိုယျလှနလေား၊ မလှနဘေူးလားဆိုတာ စိတျပူစရာ မလိုပါဘူး။ အလှအပအတှကျ အခြိနျမပေးရလို့ အခြိနျတှလေညျး ပိုထှကျလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျခဈြတဲ့သူတှကေ ရုပျရညျတှကေို ကွညျ့နမှော မဟုတျပါဘူး။ စက်ကနျ့တိုငျးခဈြနဖေို့ပဲ လိုတာပါ။
8. ယုံကွညျမှုတှေ ပိုတိုးလာပါတယျ။
မတှရေ့တဲ့ အခြိနျဆိုရငျ တဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးကို တဈယောကျက ပိုသိလာ ပါတယျ။ သူ့တနျဖိုးကွောငျ့ အဆုံးရှုံးလညျး မခံနိုငျသလို သူမရှိရငျလညျး မနနေိုငျတော့ ပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ နရောတှေ ဝေးကှာနပေမေယျ့ သစ်စာရှိရှိ နဖွေဈလာကွ ပါတယျ။ သစ်စာရှိရှိနကွေတဲ့ အခါ ယုံကွညျမှုတှေ ကလညျး တိုးသထကျ တိုးလာပါတယျ။ တကယျခဈြရငျ ဝေးကှာနပေမေယျ့ ဘယျအကွောငျးနဲ့မှ သစ်စာမဖောကျပါဘူး။
အဆင်ပြေတဲ့ အချစ်ရေး ဖြစ်ဖို့အတွက် နေ့တိုင်း အမြဲတမ်း တွေ့နေစရာ မလိုပါဘူး။ အနေဝေးနေပေမယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှု ရှိနေရင် အဆင်ပြေနေမှာပါ။ အနေဝေးတဲ့ စုံတွဲတွေမှာလည်း အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ် ။
1. သေးသေးမွှားမွှား ဂရုစိုက်တာက အစ တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။
ဖုန်းဆက်တာ၊ message ပို့တာက အနေဝေးသူတို့ အတွက် ပျော်စရာအချက်လေးတွေ ပါပဲ။ ပို့ထားပြီးသား message လေးတွေကို ပြန်ဖတ်ရတာ ကလည်း ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဆက်အသွယ် မပြတ်ဖို့ကတော့ အရေးကြီး ပါတယ်။
2. ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ ပိုရပါတယ်။
အနေဝေးနေ တာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတွေ့ရတဲ့ အခါ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေ ပိုလုပ်ဖို့ အချိန်ပိုရလာ ပါတယ်။ တွေ့စရာလည်း မလိုတာကြောင့် အချိန်ကုန်လည်း သက်သာ ပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ရန်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးလည်း နည်းသွား တာကြောင့် တော်တော်နဲ့ လမ်းမခွဲနိုင်တော့ ပါဘူး။
3. စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိန်တွေ အကြာကြီး ဝေးပြီးမှ ပြန်တွေ့ရတာဟာ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီပျော်ရွှင်မှုကို ဖော်ပြဖို့ စကားလုံးနဲ့တောင် မလုံလောက် ပါဘူး။ အကြာကြီးခွဲနေပြီးမှ တွေ့ရတဲ့ အချိန်ဟာ ဘဝမှာ အပျော်ဆုံး အချိန်ထဲက တစ်ချိန် အပါအဝင် ပါပဲ။
4. တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပိုပြီး အလေးအနက် ထားလာပါတယ်။
အနေဝေးတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ အားသာချက်က (အပျော်တွဲတာ မဟုတ်ရင်) တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အလေးအနက်ပိုပြီး ထားလာတာပါ။ တစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်ကို တစ်ယောက်က နားလည်ပေးပြီး စိတ်ရှည်ပေးတဲ့အခါ အချစ်က ပိုလေးနက် လာပါတယ်။ နားလည်မှု ရှိတဲ့အခါ လမ်းခွဲခြင်း ဆိုတာ အဝေးမှာပါ။
5. ပိုပြီး ချစ်လာကြ ပါတယ်။
အချစ်စစ် ဆိုတာ အနေဝေးတဲ့ စုံတွဲတွေကြားမှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။ အနေဝေးနေ တာတောင် မပြောင်းလဲသေးရင် တကယ် ချစ်လို့ပါပဲ။ တချို့ဆိုရင် နီးနီးလေးနဲ့ ဝေးနေတတ် ကြပါတယ်။
6. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးတတ် လာပါတယ်။
အနေဝေးနေ တာကြောင့် အခက်အခဲ တွေ့နေချိန်မှာ နားထောင်ပေးတာ၊ အကြံပေးတာ လောက်ပဲ လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ ကိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရ မှာပါ။ မကောင်းတာတစ်ခုက အခြားကိစ္စကြောင့် မဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ဆိုးနေရင် ပြန်အဆင်ပြေဖို့ အချိန်တော်တော် ယူရမှာပါ။
7. ကိုယ့်ရုပ်ရည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
လူချင်းမတွေ့ရ တာကြောင့် ဖုန်းပြောနေချိန်၊ message ပို့နေချိန်မှာ ကိုယ်လှနေလား၊ မလှနေဘူးလားဆိုတာ စိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူး။ အလှအပအတွက် အချိန်မပေးရလို့ အချိန်တွေလည်း ပိုထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေက ရုပ်ရည်တွေကို ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စက္ကန့်တိုင်းချစ်နေဖို့ပဲ လိုတာပါ။
8. ယုံကြည်မှုတွေ ပိုတိုးလာပါတယ်။
မတွေ့ရတဲ့ အချိန်ဆိုရင် တစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို တစ်ယောက်က ပိုသိလာ ပါတယ်။ သူ့တန်ဖိုးကြောင့် အဆုံးရှုံးလည်း မခံနိုင်သလို သူမရှိရင်လည်း မနေနိုင်တော့ ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် နေရာတွေ ဝေးကွာနေပေမယ့် သစ္စာရှိရှိ နေဖြစ်လာကြ ပါတယ်။ သစ္စာရှိရှိနေကြတဲ့ အခါ ယုံကြည်မှုတွေ ကလည်း တိုးသထက် တိုးလာပါတယ်။ တကယ်ချစ်ရင် ဝေးကွာနေပေမယ့် ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ သစ္စာမဖောက်ပါဘူး။
Categories အချစ် နှင့် ရသစာပေများ Tags အနဝေေး Post navigation
သှေးပေါငျခြိနျစကျ အိမျမှာဝယျထားရငျ ဖတျထားနျော
အိမျမှာအထိအခိုကျတခုခု မရှိရအောငျ ပဋ်ဌာနျးရှတျဖတျပူဇျောနညျး .